युरोपमा मार्चसम्म कोभिडबाट थप ७ लाख मानिसको मृत्यु हुने ! - Janakhabar
युरोपमा मार्चसम्म कोभिडबाट थप ७ लाख मानिसको मृत्यु हुने !
२०७८ मंसिर ८ गते, बुधबार
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी मार्चसम्म युरोपमा कोभिड संक्रमणका कारण थप सात लाख मानिसको मृत्यु हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । मार्चसम्ममा युरोप र एसियाका केही मुलुकमा कोभिड-१९ का कारण आगामी मार्चसम्ममा थप सात लाखको मृत्यु हुनसक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले चेतावनी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त समयसम्ममा ४९ मुलुकका अति सघन उपचार कक्षमा ‘उच्च वा अत्यधिक भार’ हुने डब्ल्यूएचओको भनाइ छ ।
त्यस्तै, युरोपमा कोभिड-१९ मृत्युको प्रमुख कारक बन्न पुगेको डब्ल्यूएचओले बताएको छ । ‘जारी प्रवृत्ति हेर्दा आगामी वसन्तसम्ममा मृत्यकको संख्या २२ लाखभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ’, मंगलबार डब्ल्यूएचओले भन्यो । पछिल्ला दिन कोभिडबाट मृत्यु हुनेको दैनिक संख्या दोब्बरले बढेर झण्डै ४२ सय पुगेको पनि संगठनले बतायो । संगठनका अनुसार खोप नलगाउने मानिसको संख्या धेरै भएको र केही मुलुकमा डेल्टा भेरियन्ट व्याप्त रहेकाले युरोपमा संक्रमण दर उच्च हुन पुगेको हो ।
युरोपमा पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितको संख्या तीव्र रुपले बढिरहेको छ । अष्ट्रियामा सोमबारदेखि २० दिनसम्म देशव्यापी लकडाउन लगाइएको छ । फ्रान्स, जर्मनी र ग्रीसले समेत बढ्दो संक्रमणबीच बुस्टर डोज अनिवार्य बनाएर आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण खोप लगाउने तयारी गरेका छन् । तर पुन: प्रतिबन्धात्मक नियम लागू भएपछि कैयौं मुलुकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । नेदरल्याण्डमा आंशिक लकडाउन लगाउने सरकारको निर्णयपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच कैयौं दिन हिंसात्मक झडप भएको थियो ।
मेसीको होटल तत्काल भत्काउन आदेश !
ज्वालमुखी बिस्फोट : १ जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते
सीआईएद्वारा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी गरेको दाबी